Izindaba - Hlola ama-horizons amasha we-5G aletha ku-Intanethi Yezimoto nokuxhumana kwe-V2X
I-ITProPortal isekelwa izethameli zayo. Lapho uthenga ngokusebenzisa isixhumanisi esikuwebhusayithi yethu, singathola ikhomishini yokubambisana. Funda kabanzi
Manje njengoba sesine-Internet of Vehicles technology (V2X), siyabonga ngokuhlanganiswa kobuchwepheshe be-5G nezixazululo zesoftware yezimoto ukuthuthukisa isizukulwane esisha sezimoto ezihlakaniphile.
Ukuxhumeka kwezimoto yisisombululo esithandekayo esinciphisa izingozi zomgwaqo emhlabeni jikelele. Ngeshwa, ngo-2018, izingozi zomgwaqo zadlula nemiphefumulo yabantu abayizigidi eziyi-1.3. Manje njengoba sesinobuchwepheshe be-Internet of Vehicles (V2X), siyabonga ngokuhlanganiswa kobuchwepheshe be-5G kanye nezixazululo zesoftware yezimoto ekwakhiweni kwesizukulwane esisha sezimoto ezihlakaniphile ukwenza ngcono isipiliyoni sabashayeli nokubeka kabusha abenzi bezimoto ukuze baphumelele.
Izimoto manje sezihlangabezana nokuxhumana okuya ngokwanda, kuhlangana nezinhlelo zokuzulazula, izinzwa ezisendizeni, amalambu omgwaqo, izindawo zokupaka nezinye izinhlelo zezimoto. Imoto ihlangana nemvelo ezungezile ngamadivayisi athile wokuthwebula (njengamakhamera edeshibhodi nezinzwa ze-radar). Izimoto ezixhumene nenethiwekhi ziqoqa idatha eningi, njenge-mileage, ukulimala kwezakhi ze-geolocation, ingcindezi yamathayi, isimo segeji kaphethiloli, isimo sokukhiya imoto, izimo zomgwaqo, nezimo zokupaka.
Ukwakhiwa kwe-IoV kwezixazululo zomkhakha wezimoto kusekelwa yizixazululo zesoftware yezimoto, njenge-GPS, i-DSRC (ukuxhumana okuzinikezele okufutshane), i-Wi-Fi, i-IVI (i-infotainment esemotweni), idatha enkulu, ukufunda ngomshini, i-Intanethi Yezinto, okwenziwayo ubuhlakani, i-SaaS Platform, nokuxhumeka kwe-broadband.
Ubuchwepheshe be-V2X buzibonakalisa njengokuvumelanisa phakathi kwezimoto (i-V2V), izimoto nengqalasizinda (i-V2I), izimoto nabanye ababambiqhaza bethrafikhi. Ngokwandiswa, le misebenzi emisha ingabamba nabahamba ngezinyawo nabagibeli bamabhayisikili (i-V2P). Ngamafuphi, ukwakhiwa kwe-V2X kwenza ukuthi izimoto zikwazi “ukukhuluma” neminye imishini.
Imoto ohlelweni lokuzulazula: Idatha ekhishwe ebalazweni, i-GPS kanye neminye imitshina yemoto ingabala isikhathi sokufika kwemoto elayishiwe, indawo okwenzeke kuyo ingozi ngesikhathi senqubo yesimangalo somshuwalense, imininingwane yomlando yokuhlelwa kwedolobha nokuncishiswa kwekhabhoni, njll. .
Imoto kwingqalasizinda yezokuthutha: Lokhu kufaka phakathi izimpawu, amathiphu omgwaqo, amayunithi okuqoqwa kwemali ekhokhelwayo, izindawo zokusebenza nezinkambu zezifundo.
Imoto eya ohlelweni lwezinto zokuhamba zomphakathi: Lokhu kukhiqiza idatha ehlobene nohlelo lokuhamba komphakathi nezimo zethrafikhi, ngenkathi kunconywa eminye imizila lapho uhlela kabusha uhambo.
I-5G yisizukulwane sesihlanu sokuxhumeka kwamaselula we-broadband. Ngokuyisisekelo, ububanzi bayo bokusebenza buphakeme kune-4G, ngakho-ke ijubane lokuxhuma lingcono izikhathi eziyikhulu kune-4G. Ngalokhu kuthuthukiswa kwamandla, i-5G inikeza imisebenzi enamandla kakhulu.
Ingacubungula idatha ngokushesha, inikeze ama-millisecond ama-4 ngaphansi kwezimo ezijwayelekile ne-1 millisecond ngaphansi kwesivinini esiphakeme ukuqinisekisa ukuphendula okusheshayo kwamadivayisi axhunyiwe.
Ngokudabukisayo, eminyakeni emaphakathi yokukhishwa kwayo kwe-2019, ukuthuthuka kwabanjwa ngempikiswano nobunzima, okubi kakhulu okwakungubudlelwano bayo nenkinga yezempilo yomhlaba yakamuva. Kodwa-ke, ngaphandle kwesiqalo esinzima, i-5G manje iyasebenza emadolobheni angama-500 e-United States. Ukungena nokwamukelwa kwale nethiwekhi emhlabeni wonke kuseduze, njengoba izibikezelo zango-2025 zikhomba ukuthi i-5G izothuthukisa ingxenye eyodwa kwezinhlanu ye-Intanethi yomhlaba.
Ukugqugquzelwa kokuthunyelwa kwe-5G kubuchwepheshe be-V2X kuqhamuka ekufudukeni kwezimoto ziye kwingqalasizinda yeselula (i-C-V2X) -lona ngumkhuba wemboni wakamuva futhi ophakeme kakhulu wezimoto ezixhunyiwe nezizimele. Izinkampani ezaziwayo ezenza izimoto ezinjenge-Audi, Ford neTesla zihlomise izimoto zazo ngobuchwepheshe be-C-V2X. Ngomongo:
IMercedes-Benz ibambisene neNokia neTelefonica Deutschland ukufaka izimoto ezixhunyiwe ze-5G ezizimele esigabeni sokukhiqiza.
I-BMW ibambisene ne-Samsung ne-Harman ukuvula i-BMW iNEXT enophiko lwe-5G-based telematics control unit (TCU).
Abakwa-Audi bamemezela ngo-2017 ukuthi izimoto zayo zizokwazi ukusebenzisana namarobhothi ukwazisa uma umshayeli eshintsha kusuka kobomvu kuya kokuluhlaza.
I-C-V2X inamandla angenamkhawulo. Izinto zalo zisetshenziswe emadolobheni angaphezu kwama-500, izifunda kanye nezifunda zezifundo ukuhlinzeka ukuxhumana okuzimele kwezinhlelo zokuhamba, ingqalasizinda yamandla kanye nezakhiwo zokwakha.
I-C-V2X iletha ukuphepha kwezimoto, ukusebenza kahle kanye nokuhlangenwe nakho okuthuthukisiwe komshayeli / abahamba ngezinyawo (isibonelo esihle uhlelo lokuxwayisa ngemoto ye-acoustic). Ivumela abatshalizimali namathangi okucabanga ukuthi bahlole izindlela ezintsha zokuthuthuka okukhulu ezimeni eziningi. Isibonelo, ngokusebenzisa izinzwa nedatha yomlando ukwenza kusebenze "ukucwaninga kwedijithali", izixwayiso zokushayela ezihambisanayo, ukuvimbela ukushayisana nezokuphepha kungafinyelelwa. Masibe nokuqonda okujulile kwezicelo eziningi ze-V2X ezisekela i-5G.
Lokhu kufaka ukuxhumana kwe-cybernetic kwamaloli emgwaqeni omkhulu ezimotweni. Ukuqondanisa okuseduze kwemoto kuvumela ukusheshisa okuvumelanisiwe, isiteringi namabhuleki, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukusebenza kahle komgwaqo, konge uphethiloli futhi kunciphise ukungcola. Iloli eliholayo linquma umzila, isivinini nesikhala samanye amaloli. Ukuhamba ngamaloli okuboshwe yi-5G kungabona ukuhamba okuphephile kwebanga elide. Isibonelo, lapho izimoto ezintathu noma ngaphezulu zishayela futhi umshayeli elele, iloli lizolandela umholi we-platoon ngokuzenzakalela, kunciphise ingozi yomshayeli. Ngaphezu kwalokho, lapho iloli elihola phambili lenza isenzo sokuvika, amanye amaloli angemuva nawo azosabela ngasikhathi sinye. Abakhiqizi bemishini yoqobo abanjengoScania noMercedes sebethule onobuhle bemigwaqo, futhi izifundazwe eziningana e-United States sezilandele ukulandela umkhondo wamaloli azimele. Ngokusho kweScania Group, amaloli olayini anganciphisa ukungcola okungafika kuma-20%.
Lokhu ukuthuthuka kwezimoto okuxhunyiwe ngendlela imoto ehlangana ngayo nezimo ezinkulu zethrafikhi. Imoto enesakhiwo se-V2X ingasakaza imininingwane yezinzwa nabanye abashayeli ukuxhumanisa ukunyakaza kwabo. Lokhu kungenzeka lapho enye imoto idlula bese enye imoto yehlisa ijubane ukuze ikwazi ukuhambisa umgwaqo. Amaqiniso akhombisile ukuthi ukusebenzisana okusebenzayo komshayeli kungacindezela ngempumelelo ukuphazamiseka okubangelwa ukuguqulwa komzila, ukubopha amabhuleki ngokuzumayo nokusebenza okungahlelwanga. Emhlabeni wangempela, ukushayela ngokuhlelekile akunakwenzeka ngaphandle kobuchwepheshe be-5G.
Le ndlela isekela umshayeli ngokunikeza isaziso sanoma yikuphi ukushayisana okusondelayo. Lokhu kuvame ukuzibonakalisa njengokubeka kabusha okuzenzakalelayo noma ukumisa amabhuleki ngenkani. Ukulungiselela ukushayisana, imoto idlulisa indawo, isivinini, nesiqondiso esihlobene nezinye izimoto. Ngalobu buchwepheshe bokuxhumeka kwezimoto, abashayeli badinga kuphela ukuthola amadivayisi abo ahlakaniphile ukugwema ukushaya abagibeli bamabhayisikili noma abahamba ngezinyawo. Ukufakwa kwe-5G kuthuthukisa lo msebenzi ngokusungula ukuxhumana okuhlukahlukene phakathi kwezimoto eziningi ukunquma indawo eqondile yemoto ngayinye ehlobene nabanye ababambiqhaza bethrafikhi.
Uma kuqhathaniswa nanoma yisiphi esinye isigaba sezimoto, izimoto ezizishayelayo zithembele kakhulu ekusakazweni kwedatha esheshayo. Ngokwesimo sokushintsha kwezimo zomgwaqo, isikhathi sokuphendula ngokushesha singasheshisa ukwenza izinqumo zesikhathi sangempela somshayeli. Ukuthola indawo enembile yabahamba ngezinyawo noma ukubikezela ilambu elibomvu elilandelayo kungezinye zezimo lapho ubuchwepheshe bukhombisa ukuthi kungenzeka yini. Isivinini salesi sixazululo se-5G sisho ukuthi ukucutshungulwa kwedatha ngefu nge-AI kwenza ukuthi izimoto zikwazi ukwenza izinqumo ezingasiziwe kepha ezinembile ngokushesha. Ngokufaka idatha kusuka ezimotweni ezihlakaniphile, izindlela zokufunda ngomshini (ML) zingalawula imvelo yemoto; shayela imoto ime, yehlise ijubane, noma uyiyale ukuthi ishintshe imizila. Ngaphezu kwalokho, ukubambisana okuqinile phakathi kwe-5G ne-edge computing kungacubungula ukusetha kwedatha ngokushesha.
Kuyathakazelisa ukuthi imali engenayo evela emkhakheni wezimoto ingena kancane kancane emikhakheni yamandla nomshuwalense.
I-5G yisixazululo sedijithali esiletha izinzuzo ezingenakuqhathaniswa emhlabeni wezimoto ngokuthuthukisa indlela esisebenzisa ngayo ukuxhumana okungenawaya ekuzulazuleni. Isekela inani elikhulu lokuxhuma endaweni encane futhi ithola indawo enembile ngokushesha kunanoma yibuphi ubuchwepheshe bangaphambilini. Ukwakhiwa kwe-V2X okuqhutshwa yi-5G kunokwethenjelwa kakhulu, kune-latency encane, futhi kunezinzuzo ezilandelanayo, njengokuxhuma okulula, ukuthwebula idatha okusheshayo nokudlulisa, ukuphepha komgwaqo okuthuthukisiwe, kanye nokulungiswa kwezimoto okuthuthukisiwe.
Bhalisa ngezansi ukuthola imininingwane yakamuva evela ku-ITProPortal kanye nezipesheli ezikhethekile ezithunyelwe ngqo ebhokisini lakho lokungenayo!
I-ITProPortal iyingxenye yeFuture plc, okuyiqembu labezindaba lamazwe omhlaba kanye nomshicileli ohola phambili wedijithali. Vakashela iwebhusayithi yethu yenkampani.
© I-Future Publishing Limited Quay House, i-The Ambury, iBath BA1 1UA. wonke Amalungelo Agodliwe. Inombolo yokubhaliswa kwenkampani yase-England nase Wales 2008885.